830nm 2W Fiber Diode Laser ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Box Optronics
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Fiber Coupled Lasers > High Power Diode Lasers > diode လေဆာ 830nm 2W Fiber
diode လေဆာ 830nm 2W Fiber
830nm 2W Fiber Coupled Diode Laser သည်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားမြင့်မားခြင်း၊ တည်ငြိမ်ခြင်းနှင့်သာလွန်ကောင်းမွန်သောရောင်ခြည်အရည်အသွေးတို့ဖြင့်ထုတ်ကုန်များကိုထုတ်လုပ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ထုတ်ကုန်များသည်လေဆာရောင်ခြည် diode ချစ်ပ်မှအချိုးမညီသောဓါတ်ရောင်ခြည်ကို micro micro optics သုံး၍ core အချင်းသေးငယ်သည့် output fiber သို့ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်ရရှိသည်။ ရှုထောင့်တိုင်းတွင်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်မီးရှို့ခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည်ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီ၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊
830nm 2W Fiber Coupled Diode Laser ၏ ၁။ အကျဉ်းချုပ်
830nm 2W Fiber Coupled Diode Laser ၏ ၂။ နိဒါန်း
830nm 2W Fiber Coupled Diode Laser ၏ထူးခြားချက်များ
2W output စွမ်းအား၊
62.5 / 125Î¼ 0.22NA Fiber;
430nm 2W Fiber Coupled Diode Laser ကိုအသုံးပြုခြင်း
830nm 2W Fiber Coupled Diode Laser ၏ 5. Electro-Optical လက္ခဏာများ (T = 25âƒ)
operating output ကိုပါဝါ Pout 1.0 2.0 - W
ရရှိနိုင်သည့်လှိုင်းအလျား၏အတိုင်းအတာ λ 820 830 840 nm
ရောင်စဉ်တန်း width ကို FWHM @ Î” Î» - 3.0 6.0 nm
လက်ရှိ Threshold ဟုတ်တယ် - 0.25 0.4 A
Pout မှာလက်ရှိလည်ပတ် IOP - 1.2 2.5 - A
Pout တွင်လည်ပတ်နေသောဗို့အား VOP - 1.9 1.8 2.2 V
ပါဝါပြောင်းလဲခြင်းထိရောက်မှု - - 45 43 - %
လှိုင်းအလျားအပူချိန်ကိန်း Î "Î» / Î" T က - 0.28 - nm / â
ဆင်ခြေလျှောထိရောက်မှု η - 0.95 - W / A
ဖိုင်ဘာ core ကို / ဝတ်အချင်း DCOR - 62.5 / 125 - μm / μm
Beam ကိုကိန်းဂဏန်းအကျယ် (၉၀% ပါဝါ) NA - 0.13 - -
6. ထုတ်ကုန်အသေးစိတ် 830nm 2W Fiber Coupled Diode Laser
၇။ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ သင်္ဘောတင်ခြင်းနှင့်အမှုဆောင်ခြင်း 830nm 2W Fiber Coupled Diode Laser
hot Tags:: 830nm 2W Fiber Coupled Diode Laser, ထုတ်လုပ်သူများ, ပေးသွင်းသူများ, လက်ကားရောင်းဝယ်ခြင်း, စက်ရုံ, စိတ်ကြိုက်, အမြောက်အများ, တရုတ်, တရုတ်နိုင်ငံ၌ထုတ်လုပ်သည်စျေးပေါ, စျေးနှုန်းနိမ့်, အရည်အသွေး